उत्तर कोरियामा किन गर्नुपर्छ रुने प्राक्टिस ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
उत्तर कोरियामा किन गर्नुपर्छ रुने प्राक्टिस ?
मेरो लाइफस्टाइल ||6April, 2021
संसारमा उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनलाई नचिन्ने मानिस सायदै होलान् । उनी अधिकांश समय आफ्ना कामका कारण चर्चामा रहन्छन् । उत्तर कोरियालाई एक गुप्त देश पनि मानिन्छ । किनभने त्यहाँको कुरा संसारमा कमै मात्र पुग्छ ।
यसको कारण हो, किमको तानाशाही शासन । उत्तर कोरियामा शासकको मृत्युपछि उसका लागि रुने परम्परा छ । यदि कसैले यो परम्परा पूरा नगरेमा किम परिवारले उक्त परिवारलाई सजाय दिन्छ ।
किम २०११ मा आफ्ना पिता किम जोङ इलको निधनपछि उत्तर कोरियाको सर्वोच्च नेता बनेका हुन् । उनका हजुरबाबा किम इल सुङ उत्तर कोरियाका संस्थापक र पहिलो नेता थिए । जसको मृत्यु १९९४ मा भएको थियो । त्यसपछि किम जोङ उनका पिता किम जोङ इल सुङले सत्ता सम्हाले । भनिन्छ, उत्तर कोरियाको हरेक घरमा किम जोङ उनका पिता र हजुरबुबाको तस्वीर लगाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ ।
किम जोङ इलको मृत्युपछि प्रजालाई शोक सभामा खुलेर रुन लगाइयो । आम मानिस छाती पिटेर चिच्याउँदै रोएका थिए । जो उक्त शोक सभामा रुन सकेनन्, उनीहरु भोलिपल्ट गायब भए ।
यो कुराले मिडियामा धेरै चर्चा पायो । डेली मेलको रिपोर्टका अनुसार, शासकको मृत्युपछि नयाँ राजा किम जोङ उनले पिताको लागि धेरै शोकसभा राखेका थिए । यो शोकसभामा जनतालाई त्यहाँ गएर रोएर पुरानो राजालाई धेरै माया गर्ने जस्तो साबित गर्नुपर्ने थियो । यो किमको परिवारका लागि बफादारीको प्रमाण थियो । यो शोकसभा १० दिनसम्म चल्यो । जसमा युवा, बच्चा, वृद्धवृद्धा, सबैलाई रुनुपर्ने थियो । त्यो शोकसभामा को रोएन भनेर पनि नोट गरिएको थियो । जो खरो उत्रिएनन् उनीहरुलाई कारवाही गरियो ।
१० दिनको शोकसभापछि क्रिटिसिज्म सेशन भयो । जसमा किम स्वयं उपस्थित थिए । उनले शोकसभामा राम्रोसँग नरुनेलाई ६ महिनाको कडा कैद सजाय तोके ।
भारतको बिहारमा रहेको पूर्णिया जिल्लामा दुलहीको घरमा गएको जन्तीलाई खाना पस्किन ढिलो भएपछि रिसाएका दुलाहा विवाह समारोह छोडेर भागेका छन्
एक वर्षमा २५९ पटक एलियन्स देखिएको वैज्ञानिकहरूको दाबी
संसारमा हरेक दिन एलियन्सको बारेमा धेरै अनौठो दाबी गरिन्छ, जसको बारेमा थाहा पाउँदा अचम्म लाग्छ । संसारभरका धेरै मानिसहरूले एलियन
विरुवा नै लोप हुने विज्ञको चिन्ता
तीन जना किशोरीले पुरुषको यौनांग जस्तो विरुवाको फूल टिपेको भिडियो भाइरल भएपछि कम्बोडिया सरकारले यो लोप हुने डरले सर्वसाधारणलाई त्यस्ता
वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक उमारे अन्तरिक्षमा मुला
वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा मुला उमारेएका थिए । अन्तरिक्षमा उमारिएका ती मुला अर्को वर्ष मात्र पृथ्वीमा ल्याइयो । नासाको अन्तरिक्ष